🥇 ▷ Sidoo kale marka loo eego Wall Street Journal, 2019 wuxuu arki doonaa Samsung oo la duuban karo (ama xitaa laba) ✅
Waxaan kahadalnay sanado isku laabashada taleefannada casriga ah ama dabacsanaan. Haddii had iyo jeer had iyo jeer laga hadlo lahaanshaha, tusaalooyinka iyo fikradaha, bishii la soo dhaafay xantaas ayaa shaaca ka qaaday in 2019 Foornada laalaabashada ee Samsung ayaa ah inay timaaddo (qiime qaali ah). Codka oo ahaa sidoo kale waxaa xaqiijiyay Wall Street Journal.
AKHRISO: Miyuusig Miyuusig Miyuusig Miyuus La Aruuriyay ah oo lagu qariyay CES 2018?
Sida laga soo xigtay isha wargayska, taleefanka casriga ah (oo loo yaqaan “Winner”) ayaa yeelan doona mid qiyaastii 7 ″ shaashad (iyada oo la raacayo 7.3 ″ ee horey loo sheegay) taasna way noqon kartaa isku laalaabay qeybtii “sidii jeebka”. Meeshaas, banaanka taleefanka casriga ah wuxuu ku tusayaa shaashad yar oo ku taal hore iyo kamaradaha gadaal.
Bilaabashadu waa inay bilaabataa xawaare hooseeya, si ay u daboosho suuqyo aad u khaas ah sida Ciyaartoyda. Haddii talaabadani tahay mid ay bixinayso dadkuna ay qadarin lahaayeen, waxaan ka fikiri karnaa bilow kale oo weyn qeybta labaad ee sanadka 2019.
Xitaa isha isha kama filayso guul weyn oo ka timaadda aaladda, laakiin Samsung waxa ay dooneysaa in ay noqoto mida koowaad si loogu soo bandhigo taleefanka gacanta ee la laalaabanayo ee suuqa, illaa inta mashruucu yahay “mudnaanta ugu sareysa”. Xitaa sida laga soo xigtay isha, qiimaha wuxuu noqon karaa qiyaastii $ 1,500, ama sidoo kale wax yar ka badan. Miyaad ku bixin lahayd taleefanka gacanta ee la laabi karo?
Xigasho: Wall Street Journal